Xanta cusub ee ku saabsan Mac Pro cusub iyo Mac mini sanadkan 2022 | waxaan ka imid mac
Wararka xanta ah ee ku saabsan Mac Pro cusub iyo Mac mini sanadkan 2022
Manuel Alonso | | Kombiyuutarada Mac, Xanta
Wararka xanta ah ee soo bandhigaya aaladaha aan awoodno inaan aragno 2022-ka, waxay muujinayaan inaan sidoo kale arki karno laba kombiyuutar oo cusub oo Apple ah iyo processor-rada cusub ee Apple Silicon. Waxaan ka hadalnaa jiritaanka Mac Pro yar iyo Mac mini cusub sidoo kale. Laba cusub oo la filayo in isticmaalayaashu ay rajeynayaan inay ku arkaan suuqa, maadaama ku dhawaad ​​​​dhammaan kala duwanaanta Mac la cusbooneysiiyay, marka laga reebo moodooyinkan iyo si daacad ah, waxay aad muhiim ugu yihiin liiska si ay u dayacaan cusbooneysiintooda.
Ilaa hadda wararka xanta ah ee cusub ee soo baxaya AirPods Pro IIWaxaan ka hadleynaa xanta cusub oo tilmaamaya in aan arki karno laba nooc oo cusub oo Mac ah oo suuqa ku jira 2022. Wax kale oo dheeraad ah ma jiraan wax ka yar Pro cusub iyo model mini. Xaqiiqdu waxay tahay in kaliya laga fikirayo qaabka Pro oo leh tignoolajiyada Apple Silicon Markaan aragno sida ugu dhakhsaha badan ee MacBook Pros-ku ugu shaqeynayaan chips-yada cusub, waa inay noqdaan kuwo la yaab leh iyo mashiinka sare.
Si la mid ah Mac mini, Kumbuyuutarkaas kala duwan ee aan lahayn wax yar oo awood ah si uu u noqdo mid qumman oo hadda laga yaabo in uu waqtigiisii ​​yimid oo uu dadka kale uga tago xusuus ahaan.
Marka loo eego saadaasha lagu sameeyay Mark Gurman's Power On blog ee Bloomberg, Mac Pro oo leh Apple Silicon wuxuu bilaabi doonaa 2022. Gurman wuxuu qiyaasayaa in moodelku ka yaraan doono naqshadda hadda jirta ee Mac Pro isla markaana, waxaa la filayaa inuu ka koobnaado qaar ka mid ah hagaajinta waxqabadka marka la isticmaalayo nashqada chip ee Apple u gaar ah. Nooca Mac Pro ee Apple Silicon waxaa lagu xamanayaa inuu ku jiro chip wata ilaa 40 koor oo ku jira CPU iyo 128-core GPU. Markii hore, Bloomberg waxay sheegtay in Mac Pro uu isticmaali doono midkood 20-core ama 40-core CPUs, iyo sidoo kale xulashooyinka 64-core iyo 128-core GPU. Si kale haddii loo dhigo, waxay si fiican u hagaajinaysaa saadaasha in ka badan. Marka la eego cabbirka Mac Pro-kan cusub, Tilmaan in ay ka yarayn karto G4 Cube.
Gurman sidoo kale wuxuu aaminsan yahay in Mac mini cusub uu soo socdo. Ikhtiyaarada dekedaha waxa la rumaysan yahay inay ku jiraan isku darka USB 4 iyo USB-A, Gigabit Ethernet, HDMI, iyo xidhiidhiyaha korantada magnetic. Ka fikir nooc ka mid ah chip-ka M1 sida M1 Pro ama M1 Max, ama jiil cusub oo la mid ah kii hore ee M2.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Wararka xanta ah ee ku saabsan Mac Pro cusub iyo Mac mini sanadkan 2022
Ku dhawaaqida saamaynta Apple Watch
Kuo wuxuu dib u eegaa wararka ku saabsan AirPods Pro 2